နိုင်ငံတကာသတင်း Archives - MM Live News
မိုးခေါင်လို့ ဖားနှစ်ကောင်ကို ပေးစားကာ မိုးခေါ်ခဲ့သည့် ပြည်နယ် ရေကြီးသဖြင့် ထိုဖားနှစ်ကောင်ကို ပြန်ကွာရှင်းပေးရတဲ့ဖြစ်ရပ်
September 17, 2019 September 17, 2019 MM Live
ဖားနှစ်ကောင်ကို ပေးစားကာ မိုးခေါ်ခဲ့သည့် ပြည်နယ် ရေကြီးသဖြင့် ထိုဖားနှစ်ကောင်ကို ပြန်ကွာရှင်းပေး အိန္ဒိယနိုင်ငံ Madhya Pradesh ပြည်နယ်က ဒေသတစ်ခုမှာ ဒီနှစ်မိုးရာသီအစ မိုး လုံးဝမရွာပဲ မိုးခေါင်ရေရှားဒဏ် ခံနေရလို့ ကျေးရွာ ဓလေ့အယူအဆအတိုင်း …… ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့က ဖားအထီးနှင့် အမ နှစ်ကောင်ကို မင်္ဂလာဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူတို့ ကျေးရွာဓလေ့မှာ ဖားတွေပျော်မြူးရင် မိုးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆရှိလို့ ဒီလို မင်္ဂလာဆောင်ပေးလိုက်ကြတာပါ။ တိုက်ဆိုင်တယ်လို့ ပြောရမလား။ အဲ့လို ဖား ၂ ကောင်ကို မင်္ဂလာဆောင်ပေးပြီး နောက်ပိုင်း အဲ့ဒီ ဒေသမှာ မိုးတွေ ရွာလာပါတယ်။ ရွာတာမှ ၁၃ နှစ်အတွင်း မိုးတွေ အများဆုံး ရွာသွန်းတာဖြစ်ပြီး ရေတွေပါ ကြီးလာပါ‌တော့တယ်။ ထို့ကြောင့် […]
၁၈ နှစ်ပြည့်ရင် လက်ထပ်မယ်လို့ ကတိပေးပြီး ကာမ ၂၈၅ ကြိမ် ကျူးလွန်
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှ ကျူရှင်ဆရာတစ်ဦးက ၁၄ နှစ်အရွယ် သူ့ရဲ့တပည့်မလေးကို အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ရင် လက်ထပ်ပါမည်ဟု ကတိပေးပြီး နှစ်နှစ်အတွင်း ကာမလိမ်လည်ရမှုပေါင်း ၂၈၅ ကြိမ် ကျူးလွန်ခဲ့သည်။ “လန်” ဟူသော မိန်းကလေးမှာ အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်ထဲက “ဖန်း” ဆိုသည့် ဆရာထံတွင် ကျူရှင်တက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း သူမအသက် ၁၄ နှစ်ဝင်ကာစမှာ ကျူရှင်ဆရာ “ဖန်း” က သူမအား ချစ်ခင်နှစ်သက်ကြောင်း ဖွင့်ပြောခဲ့ပြီးနောက် သူမ အသက် ၁၈ ပြည့်ရင် လက်ထပ်မယ်လို့ ကတိပေးခဲ့တဲ့အတွက် ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ မိန်းကလေးရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ဘယ်လိုရယူခဲ့တယ်ဆိုတာ အတိအကျမသိရပေမယ့် ကျူရှင်ဆရာရဲ့ အပြောချိုချိုလေးတွေကြောင့် သူတို့နှစ်ဦး ချိန်းတွေ့တဲ့အဆင့်ထိရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူမ ၁၆ နှစ်ပြည့်ခါနီးမှာ […]
ရည်းစားမရှိတဲ့သူတွေလာစားရင် တစ်ခါတည်း အတွဲချိတ်ပေးတဲ့ စားသောက်ဆိုင်….
September 14, 2019 MM Live
တစ်ယောက်တည်းပါ၊ တစ်ယောက်တည်းပါ အော်နေတဲ့ Single တွေ၊ FA တွေအတွက်ကတော့ ဒီလိုစားသောက်ဆိုင်မျိုးက တကယ့်ကို ထူးရှယ်ပါပဲ။ ရည်းစားမရှိတဲ့ ကိုကို၊ မမတွေ အကယ်လို့များ Apannpyay ပရိသတ်တွေရဲ့ အသိတွေထဲမှာ ရှိခဲ့ရင် လက်တို့ပေးမှရမယ့် စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုပါ။ ဆိုင်ကတော့ မလေးရှားနိုင်ငံ၊ Kulai မှာ ရှိပါတယ်။ Xing Fu Xiao Guo လို့ ခေါ်တဲ့ ဆိုင်ပါ။ ဆိုင်က ညစာကို အဓိက ထားရောင်းပြီး၊ စားသောက်ရတဲ့ စတိုင်က ထူးခြားပါတယ်။ အကယ်လို့ ကိုယ်က တစ်ယောက်တည်းသမား၊ ရည်းစားမရှိသူဆိုရင် ဆိုင်ကို တစ်ယောက်တည်းလာမှာပါ၊ ဘယ်အချိန်မှာပါဆိုပြီး၊ ဘိုကင်လှမ်းတင်ထားရပါတယ်။ ဘိုကင်မှာ အဲဒီလို တင်ထားတာနဲ့ ဆိုင်ကနေ သီးသန့်လုပ်ထားတဲ့ အပြင်အဆင်စားပွဲမှာ တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးတဲ့ […]
CCTV ရှိတာကို မသိတဲ့ အိမ်ဖော်မှ ကလေးကို ရိုက်နှက်တာကို မိဘတွေ မြင်သွားပြီး စိတ်မထိန်းနိုင်ဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်ရပ်
လူ့လောကက အသိုင်အဝိုင်းမှာ မရှိလို့ မတတ်သာလို့ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြရတဲ့ လူအမျိုးမျိုးရှိနေကြတဲ့ အထဲမှာ မိမိရဲ့ အလုပ်ရှင် မိသားစုများအပေါ်မှာ စေတနာ အရင်းခံထားပြီး …. မိသားစုစိတ်ဓာတ်ဖြင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသူများရှိသလို မလွှဲသာမရှောင်သာလို့ လုပ်ကိုင်နေရပေမယ့် စေတနာမဲ့လွန်းတဲ့ အလုပ်သမားတွေဆိုတာလည်း လူ့လောက အသိုင်းအဝိုင်းမှာ မျိုးစုံအောင် ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံက လူမှုကွန်ယက်စာပျက်နှာ ပေ့တစ်ခုက တင်ပြထားတဲ့ CCTV မှတ်တမ်း ဗွီဒီယိုဖိုင်လေးကို ကြည့်ပါ။ ဒီ CCTV မှတ်တမ်း ဗွီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာ အိမ်ရှင်မိဘတွေ မရှိခိုက် အိမ်ဖော်မ တစ်ဦးဟာ ကလေးကို နို့ဗူးတိုက်ရာမှာ စိတ်မရှည်စွာဖြင့် ကြမ်းတမ်းစွာ ရိုက်နှက်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အိမ်ဖော်အမျိုးသမီးဟာ အိမ်မှာ CCTV တပ်ဆင်ထားခြင်းကို သိပုံမပေါ်ပါဘူး။ အိမ်ရှဖြစ်တဲ့ ကလေးမိဘများက CCTV မှတ်တမ်း ဗွီဒီယိုဖိုင်ကို […]
မိဘတွေကတော့ သားဖြစ်သူသေဆုံးလို့အလောင်းကိုသယ်ဘို့ လာတော့မှသိလိုက်ရတဲ့အဖြစ် . . .
May 31, 2019 MM Live
အမြတ်ဆုံး ဒါန ထိုင်းမြောက်ပိုင်း ချင်းရိုင်ခရိုင်မှာ ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် အရေးပေါ် ဆေးရုံတင်ထားရသူ နိုင် ဖုန်စထွန်း အသက်(၁၈) နှစ်ဟာ ဆေးရုံတက်နေချိန်မှာ သူသေခဲ့ရင် ဆေးရုံမှာ အရေးပေါ်ခွဲစိတ်ပြီး……. ကိုယ်အတွင်းအပြင် အစိတ်ပိုင်းတွေ အစားထိုးကုသဖို့ အတွက် သူ့ သေဆုံးတာနဲ့သူကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို အေ၇းပေါ်လူနာတွေအတွက်သုံးဘို့လူနာရှင်ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ထိုးပြီး ဆေးရုံကို လှူတမ်းခဲ့ပါတယ်။ မိဘတွေကတော့ သားဖြစ်သူသေဆုံးလို့အလောင်းကိုသယ်ဘို့ လာတော့မှ သိသွားခဲ့ပါတယ်။ဆေးရုံကလည်း သားဖြစ်သူရဲ့ဆေးရုံလှူပါတယ်ဆိုတဲ့ သက်သေပြောဆိုချက် ရုပ်သံမှတ်တမ်းရိုက်ကူးထားပြီး မိဘတွေကို ပြသခဲ့ပါတယ်။ သားဖြစ်သူ လုပ်ရပ်ဟာ မိဘတွေ စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြမှာ စိုးရိမ်ပြီး မပြောခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။သားအလောင်းကို နေရပ်ပြန်သယ်ခွင့်မရပေမယ့် သားရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဂုဏ်ယူပါတယ်လို့[…]
ထိုင်းတောင်ပိုင်း၊ ဖူးကက်ခရိုင်မှာ မြန်မာလူငယ် ၁၀၀ တုတ်ဓားကိုင်ပြီး အုပ်စုဖွဲ့ပွဲကြမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်…..
May 30, 2019 MM Live
ထိုင်းတောင်ပိုင်း၊ ဖူးကက်ခရိုင်၊ ပါတောင်ကမ်းခြေမှာ တုတ်ဓားကိုင်ပြီး အုပ်စုဖွဲ့ ခိုက်ရန်ဖြစ်တဲ့ မြန်မာလူငယ် ၁၀၀ နီးပါးကို ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့က လူစုခွဲဖြိုခွင်းခဲ့ရတယ်လို့ မတီချွန်းထိုင်းသတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်…. မေလ ၂၆ နဲ့ ၂၇ ရက်အကြား ညဥ့်သန်းခေါင်ကျော်အချိန်လောက်မှာ ဖူးကတ်မြို့နယ် ပါတောင်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့တွေ နယ်မြေလုံခြုံရေးစောင့်ကြပ်နေစဉ် လိုမာမြူနီစီပယ်ပန်းခြံနဲ့ ဘောလုံးကွင်းတဝိုက်မှာ ဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့ လူငယ်တွေဟာ…… လက် ထဲ မှာ လည်း ဓား တို၊ ဓား ရှည် တုတ် တွေ ကိုင် ဆောင် ထား တာ ကြောင့် တာ ဝန် ရှိ သူ တွေ က ဝင် ရောက်ဖမ်း ဆီး ရာ မှာ တ ချို့ […]
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဆူရတ် အနုပညာကျူရှင်သင်တန်းကျောင်း မီးလောင်မှု့ တွင် သေဆုံးသူ ၂၃ ဦးအထိ ရှိလာ
May 25, 2019 May 25, 2019 MM Live News
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဆူရတ် အနုပညာကျူရှင်သင်တန်းကျောင်း မီးလောင်မှု့ တွင် သေဆုံးသူ ၂၃ ဦးအထိ ရှိလာ အိန္ဒိယနိုင်ငံဂူဂျာရတ်ပြည်နယ်ဆူရတ်မြို့ ရှိအနုပညာကျူရှင် ကျောင်းတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်မီးလောင်မှု့ တွင်သေဆုံးခဲ့သည့် အရေအတွက်မှာ ယနေ့ (မေ ၂၅ စနေ ) တွင် ၂၃ ဦးအထိရှိသွားပြီဟု အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များက အတည်ပြုသည်။ ဒေသစံတော်ချိန် မေ ၂၄ ညနေ ၃း၄၅ နာရီတွင် အထပ်၎ ထပ်ရှိ အဆိုပါအနုပညာဆရာဖြစ်သင်တန်းကျူရှင်စင်တာ၏ တတိယထပ်နှင့်အပေါ်ဆုံးထပ်မှစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့သည့် မီးကြောင့် သေဆုံးခဲ့သူအများစုမှာ အသက် ၁၄ နှစ်မှ ၁၇နှစ် အရွယ်လူငယ်များဖြစ်သည်။မီးလောင်မှု့ ကြောင့် ပိတ်မိခဲ့ကြ ခြင်းဖြစ်ကာ မျက်မြင်များ၏အဆိုအရ မီးသတ်ကားမှာ မီးလောင်မှု့ ဖြစ်ပြီး ၄၅ မိနစ်ကြာမှ ရောက်ရှိလာသည်ဟုလည်း ဆိုသည်။ သတင်းများအရလျှပ်စစ်ဝါယာရှော့မှစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ခြင်း ဟုဆိုသော်လည်း မီးလောင်မှု […]
ဖေဘုတ် အကောင့်အတုပေါင်း သန်း သုံးထောင်ကို ၆ လအတွင်း ရှင်းလင်းမည်
May 24, 2019 MM Live News
ဖေဘုတ် အကောင့်အတုပေါင်း သန်းသုံးထောင်ကိုခြောက်လအတွင်း ရှင်းလင်းမည် တကမ္ဘာလုံးမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ ဖေဘုတ် အကောင့်အတုပေါင်း သန်းသုံးထောင်ကိုခြောက်လအတွင်း ၇ှင်းလင်းမယ်လို့အမေရိကန် အခြေစိုက် ဖေ့ဘုတ် ဌာနချုပ် က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ မူရင်း ပုံနဲ့ မတင်တဲ့သူတွေ တခြား ပုံအမျိုးမျိုးနဲ့အကောင့်တွေဖွင့်ထားသူတွေ သတင်းအချက်အလက် အတိအကျ မရှိတဲ့ မိမိပုံအမှန် -ဖုန်းနဲ့နေရပ် လိတ်စာ အတိအကျ ပေးမထားတဲ့ အကောင့်တွေ နဲ့ငွေပေးပြီး အကောင့်အတုများစွာဖွင့်ထားကြသူတွေရဲ့ကောင့်တွေ ရှင်းထုတ်တဲ့ အထဲပါနိုင်ပါတယ်။3billion fake accounts from October to March, twice as many as […]
အီရတ်စစ်မြေပြင်မှာ ကျဆုံးခဲ့တဲ့ မြန်မာလူမျိုး အမေရိကန်စစ်သား ဝေဖြိုးလွင်း
အီရတ်စစ်မြေပြင်မှာ ကျဆုံးခဲ့တဲ့ မြန်မာလူမျိုး အမေရိကန်စစ်သား ဝေဖြိုးလွင်အရင်ရေးဖူးပြီးသားပါ။ ၂၀၀၅ ခုနှစ် မတ်လ၂ ရက်နေ့က အီရတ်စစ်ပွဲမှာ ကျဆုံးခဲ့တဲ့ မြန်မာနွယ်ဖွား အမေရိကန် ကြည်းတပ်က ရိုးရိုးတပ်သားဝေဖြိုးလွင်ပါ။ အဲဒီနေ့က သူတို့စီးလာတဲ့ ဟမ်းဗီးယာဉ်မိုင်းထိပြီး ကျဆုံးခဲ့တာပါ။ သူနဲ့အတူကျဆုံးခဲ့တဲ့သူက မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင် အဇာအလီဆိုတဲ့ တပ်သားပါ။ သူတို့ဟမ်းဗီးယာဉ်ဟာ လေဆိပ်နဲ့ Green Zone ကြားထဲမှာ အတိုက်ခံလိုက်ရတာပါ။ နှစ်ယောက်စလုံး အသက် ၂၇ နှစ်ရှိပြီး အိမ်ထောင်မရှိသူများဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာသိပ်မတွေ့ရပေမဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်လောက်က ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့Trader Hotel ကထုတ်တဲ့ မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင် မှာတော့ ဂစ်တာနိုင်ဇော်ကဝေဖြိုးလွင်အမေနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီး ဆောင်းပါးပြန်ရေးခဲ့တာရှိပါတယ်။ ရိုးရိုးတပ်သားလေးများသာဖြစ်တဲ့ သူတို့အလောင်းတွေကို အမေရိကန်အထိပြန်သယ်လာပြီး တိုက်လေယာဉ်တွေ၊ ရဟတ်ယာဉ်တွေပါတဲ့ ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့န့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကိုယ်တိုင် အလေးပြုပါတယ်။ ကိုဝေဖြိုးလွင်အိမ်မှာ အသုဘအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့အချိန်ကနေစပြီး […]